Delivery မော်စကိုရှိပန်းပွင့်နှင့်သီး "စတော်ဘယ်ရီအရောင်" နဲ့ box ထဲမှာရေးစပ်သီကုံး - အမိန့်ပန်းပွင့်
လျှောက်လွှာအတွက်ရူဘယ် 100 လျှော့! အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
လျှောက်လွှာအတွက်ရူဘယ် 100 လျှော့!
ရူဘယ် ၂၀၀၀ အထိ
2 - 000 ရူဘယ်
3 - 000 ရူဘယ်
5 - 000 ရူဘယ်
9 - 000 ရူဘယ်
ပန်းပွင့်နှင့်သီးများပါသောသေတ္တာထဲတွင်ရေးစပ်ပုံ "Strawberry shine"
10 စင်တီမီတာ 30 စင်တီမီတာ
၁၀၀၀၀၀၀ လျှော့စျေး app ထဲမှာ
ပစ္စည်းပို့ရန် ~4နာရီ။မော်စကိုတွင်အခမဲ့
လတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီ၏ 700 သေတ္တာနှင့်ဆီးနှင်းဖြူ gypsophila တစ် box- နှလုံးထဲမှာဖွဲ့စည်းမှု3pcs ။
အနံ 30 စင်တီမီတာ
အမြင့် 10 စင်တီမီတာ
ပန်းအလှပြင်သူ၏အလုပ်နှင့်ပတ်သက်။ 47 သုံးသပ်ချက်များ:
Olga Khasanova URBAN ဆု 19-07-2021
သင်၏ချက်ချင်းပေးပို့ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ အကောင့်ကိုချက်ချင်းဖွဲ့စည်းသည် ကျွန်တော်ဒီအွန်လိုင်းစတိုးကိုအကြံပေးလိုပါတယ်
ကျွန်မရဲ့သတို့သမီးဆီရောက်လာတဲ့ပန်းတွေကိုအရမ်းကျေနပ်မိပါတယ်။ သူမမွေးနေ့မှာပျော်နေတယ်၊ ​​ပန်းတွေအရမ်းအနံ့ရှိပြီးအရမ်းလှတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှု! အတိအကျငါအမိန့်အဖြစ်အလွန်ချက်ချင်း။ ငါနောက်တစ်ခါထပ်သုံးမယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ကို Dmitry 23-04-2021
အလွန်ဝန်ဆောင်မှု, အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်တက်ကြွသောဝန်ဆောင်မှု။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်
အန်နာ Kozlova 11-12-2020
ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ဆုကြေးဇူးကိုထွက်လှည့်။ လှပသောပန်းပွင့်များနှင့်သူ့ဟာသူဒီဇိုင်း။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်ရင်ခုန်စရာ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးသတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်ယူဆောင်ခဲ့သည်။
အရမ်းအေးတာပေါ့။ ယခု မှစ၍ ငါသည်သင်တို့ကိုမှာယူမည်။
ပုံမှာပြထားသလိုထူးခြားတဲ့ပန်းစည်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊ နံနက်စောစောမှာ (သူတို့ကသြဂုတ်လ ၃၁ ရက်တွင်ပို့ရန်အမိန့်ပေးသည်) မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ပန်းစည်းသည်နံနက်ယံ၌တစ်ညလုံးပန်းတစ်ပွင့်ဆိုင်မှထွက်သွားပြီဟူသောခံစားချက်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ပေးပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားချက်များမရှိပါ။ ပန်းစည်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မော်စကိုမှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော့်အစ်မအတွက်ဘီလာရုစ်ကပန်းတွေကိုကျွန်တော်မှာယူခဲ့တယ်။ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအရမ်းရတယ်။ ငါနှင်းဆီပန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့တာကြာပြီ။ ဖြစ်ကောင်းသုံးပတ်ရပ်နေ၏။ အရမ်းလတ်ဆတ်ပြီးစူပါတော်တော်လေး။ ယူပါ၊ ပြီးတော့သင်နောင်တမရပါ။
နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအီကွေဒေါနိုင်ငံမှနှင်းဆီပန်း ၁၅ အုပ်၊ အဖြူရောင် lisianiusus 15 pcs၊ အဖြူရောင် gypsophila 10 pcs ဖြူ cymbidium သစ်ခွ 10 pcs, ယူကလစ်ပင်တစ်ဗူး၊ salalal 11 pack, white freesia 1 pcs
20100 XNUMX ₽ နှင်းဆီပန်းနှင့်သစ်ခွပန်းသီး "Britney"
2 နာရီ 30 မိနစ်၌တည်၏
လျှောက်လွှာ link ကိုပို့ပါ
ချိုင့်ဝှမ်း၏လီလီ 100, အစိမ်း, မြေဆီလွှာ, ရေညှိ, တောင်း
41750 XNUMX ₽ ချိုင့်ဝှမ်း၏နှင်းတော "ချိုင့်ဝှမ်း" (ချိုင့်၏ 101 နှင်းတော)
အလှဆင်ထားတဲ့သေတ္တာ - အထုပ်ထဲမှာအနီရောင်နှင်းဆီပန်းနှင့်အတူပန်းအစီအစဉ်။ ဖွဲ့စည်းမှု: နှင်းဆီ - 35 pcs ။ အထုပ်သေတ္တာ - 1 pc ။ ဖဲကြိုး - 1 pc ။ ပို့စကတ် - စာအိတ် - 1 pc ။
7250 XNUMX ₽ ပန်းပွင့်အစီအစဉ် "Love Message"
ပန်းများမှတောက်ပသောအရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပန်းစည်း - gerbera mix 12၊ အဖြူရောင် alstroemeria 5၊ အဖြူရောင်ချယ်သရမ် ၃၊ ပန်းရောင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ၃၊ သေးငယ်သော chamomile 3၊ ခရမ်းရောင် lisianthus 3၊
8250 XNUMX ₽ ပန်း၏ပန်းစည်း "ရာသီ၏ Hit"
ပရီမီယံအတန်းအစား Mondial Pink (101 pcs) ၏ရှည်လျားသောနှင်းဆီပန်းများဖြစ်သောအီကွေဒေါနိုင်ငံပန်းစည်း။
24250 XNUMX ₽ နှင်းဆီပန်းစည်း "Mondial Pink"
အနီရောင်နှင်းဆီ ၁၁ လုံးပါသောအနီရောင်အနီရောင်နှင်းဆီဒီဇိုင်းကို kraft စက္ကူဖြင့်အလှဆင်ထားသောအစိမ်းရောင်သစ်သားနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
2350 XNUMX ₽ 11 နှင်းဆီပန်းအနီရောင် Naomi ၏ပန်းစည်း
အနီရောင်နှင်းဆီပန်း ၁၅ လုံး၊ အဖြူရောင်သစ်ခွ ၇ လုံး၊ အဖြူရောင် freesias၊ salal၊ ၃ aspidistra၊ ဖဲကြိုးများ။
5900 XNUMX ₽ ပန်း၏ပန်းစည်း "Tet-A-Tet"
Tulip 51, ယာဉ်
6050 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Taleya နှင်းဆီ ၁၀၁ လုံးပါသောတောင်းသည်အလှဆင်ထားသောအစိမ်းရောင်နှင့်အတူ။
16570 XNUMX ₽ နှင်းဆီပန်းအိတ်များ "Crema de la crema" (၁၀၁ နှင်းဆီ)
မော်စကို, Vodoprovodny လမ်းသွား d2 st1
လျှောက်လွှာအတွက်ပန်းစည်းကနေရူဘယ် 100 လျှော့!
sms ရှိ link မှ Floristum အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
မက်ဆေ့ခ်ျအားဖြင့် link ကိုပေးပို့ *
QR ကုဒ်ကို scan ဖတ်ခြင်းဖြင့် app ကို download လုပ်ပါ။
* ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏တရားဝင်စွမ်းရည်နှင့်သဘောတူညီမှုကိုအတည်ပြုသည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ, ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သဘောတူညီချက် и အများပြည်သူကမ်းလှမ်းမှု